warkii.com » SHAXDA SANADKA: Shaxdii Ugu Fiicnayd Premier League Xilli Ciyaareedkan Oo Xog Dhab Ah Ku Salaysan & Tirada Kooxdaadu Heshay
SHAXDA SANADKA: Shaxdii Ugu Fiicnayd Premier League Xilli Ciyaareedkan Oo Xog Dhab Ah Ku Salaysan & Tirada Kooxdaadu Heshay
Shabakadda WhoScored.com ayaa soo xulatay shaxda kooxdeedii ugu fiicnayd guud ahaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan oo dhan iyadoo ku salaynaysa xogtii iyo qaab ciyaareedkii dhabta ahaa ee ciyaaryahanka maadaama oo ay tahay shabakad xog ururinta kubadda cagta qaabilaysan.
Shaxdan oo kooxaha waaweyn inteeda badan laga qabsaday ayay min laba ciyaartoy ugu soo baxeen Liverpool, Leicester City iyo Wolves.
Aan ku bilawnee booska goolhayaha ayuu soo galay Bernd Leno oo shabaqa uga masuul ah Arsenal, la’aanta 28 sano jirka ree Germany ayay xaalada Arsenal iyo xaqiiqada ah inay hadda booska 10-aad fadhidaa sidan kasii xumaan lahayd.
Labada daafac dhexe ee shaxdan ayaa kala ah hoggaamiyaha Liverpool ee Virgil Van Dijk iyo James Tarkowski oo Burnley aad muhiim ugu ah halka ay daafacyada garbaha kusoo kala baxeen Ricardo Pereira iyo Lucas Digne oo Leicester iyo Everton kala ah sida ay u kala horreeyaan.
Khadka dhexe ee shaxdan oo uu seegay kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson una sharaxan xiddiga sanadka ee Premier League ayay kusoo baxeen kubad sameeyaha City ee Kevin De Bruyne oo qudhiisu murashax u ah abaalmarinta PFA waxaana la midaysan James Maddison oo Leicester City ah.
Garbaha shaxdan oo hanaanka 4-4-2 u samaysan ayaa kala ah Sadio Mane oo qudhiisa dad badani u arkaan inuu mudan yahay xiddiga sanadka ee Premier League kaddib marar dhawr ah oo uu Liverpool kaligii bedbaadiyay waxaana garabka kale ah Adama Traore oo Wolves xilli ciyaareedkan kusoo dhalaalay.
Labada weeraryahan ee shaxdan ayaa kala ah Anthony Martial oo 17 gool oo rigoore la’aan ah usoo dhaliyay Man United ilaa haatan iyo Raul Jiminez oo isna 17 gool usoo dhaliyay Wolves.
Xulashada Martial iyo Jiminez ayaa meesha ka saaraysa Jamie Vardy (23 gool), Danny Ings (21 gool) iyo Pierre Emerick Aubameyang (20 gool).
Shaxda Oo Sawir Ah & Qiimaynta Ciyaaryahan Kasta Uu Haysto
Ugu Dambayn, Adigu akhriste sideed u aragtaa shaxda WhoScored.com, aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee faalada.